Qaata Draxler Oo Keena….. – PSG Oo Heshiis Xiddigo Is-Dhaafsi Usoo Bandhigaysa Arsenal & Xiddiga Ay Ka Doonayso | Weheliye Online
Kooxda ree France ee Paris Saint-Germain ayaa la xusayaa inay doonayso inay dhigeeda Arsenal u bandhigto saxeexa kubad sameeyaha ree Germany ee Julian Draxler taas bedelkeedana ay ka helaan da’yarka ree France ee Matteo Guendouzi.
Arsenal ayaa hore loola xidhiidhinayay saxeexa Draxler mudo dheer waxaana la aaminsan yahay inay dib usoo nooleeyeen xiisaha ay u qabeen kaddib markii ay Borussia Dortmund u sheegtay in Julian Brandt uusan iib ahayn.
Wargeyska caanka ka ah France ee L’Equipe ayaa sheegaya in Paris ay haatan diyaar u tahay inay u dhaqaaqdo saxeexa Guendouzi kaas oo sagaal sano kusoo qaatay akaademiga kooxdeeda.
Wargeyska ayaa intaas ku daraya in Matteo Guendouzi uu bar-tilmaameed u ahaa Paris Saint-Germain kahor intii uusan Arsenal kaga biirin dhinaca kooxda Lorient sanadkii 2018.
Guendouzi ayuusan in badan adeegsan tababare Mikel Arteta tan iyo markii ay isku dhaceen weeraryahanka Brighton ee Neal Maupay xilli ciyaareedkii hore taas oo dhalisay in su’aal laga keeno hab fikirka iyo dhaqanka da’yarkaas.
Markale dhaqan xumada garoonka dhexdiisa ee Guendouzi ayaa ah mid kasii socota kooxda uu qaabka amaahda ah kula joogo ee Hertha Berlin iyadoo dhawaan la arkayay isaga oo la murmaya saaxiibkiisa kooxda ee Matheus Cunha kulankii ay guuldarrada 4-1 ka ah kala kulmeen Werder Bremen.
Heshiiska Julian Draxler uu kula joogo PSG ayaa ah mid dhacaya dhammaadka xilli ciyaareedkan, iyadoo la filayay inuu dhammaysan doono qandaraaskiisa ayaa haatan loo badinayaa in loo fududayn doono oo uu January bixi karo.
Previous articleMaamulka Galmudug oo magacaabay guddi maamula deegaanka Wisil ee Mudug
Next articleTaabid Cabdi oo si kulul u cambaareeyay dagaalka Baladxaawo ,fariin culusna u diray dowladda & Jubbaland.